Ibhlog yokuthengisa izindlu nomhlaba-okwenyani
ezaposwa ngomhla Matshi 5, 2020 by okwenyaniWW
Gqi beliswa: Mar 5, 2020 13: 29
Izibonelelo zeRente yokuqeshisa vs Ukuba noMnini weKhaya
Imeta:Akusoloko kulula ukwenza isigqibo sokuba uyayiqasha na indlu yakho. Ihlala iza neengcebiso ezininzi kunye nokucamngca kuba ungafuni ukuzisola ngesigqibo sakho emva kweenyanga ezimbalwa uzolile. Cinga ngezi zinto zilandelayo ukukunceda uthathe isigqibo.
Kwiminyaka embalwa eyadlulayo, bekuyinto encomekayo oko ngexabiso lokuphumelela kwendlu ukuba nendlu ngokuchasene nokuqasha. Emuva ngo-2018, nangona kunjalo, ezinye iinguqu eziphambili zerhafu zazisa umendo phakathi kwezi zimbini zisondeleyo.
ifoto / imhlophe-bubble-umzekeliso-1111372 /
Njengokuthatha isigqibo kweyona nto ibalaseleyo izinto ezikhuselekileyo eziphathwayo ukukhusela ezona zinto zixabisekileyo kuwe, cinga ngoku kulandelayo ukuze ukhusele isigqibo sokuqeshisa ngendlu yakho.
Ukuma okwangoku kwiNdlu eyirente
Imifanekiso / amaqhosha-izandla-ezakhe-ithenge-ethengisa-ikhaya-1317389 /
Ithini imeko yakho yezemali ngalo mzuzu? Ngaba ungumsebenzi okhuselekileyo okanye ngaba yinto yethutyana? Ngaba awutshatanga, okanye unosapho; Ukulungisa okanye uhlala usiya? Yintoni injongo yakho yexesha elide? Fumana isicwangciso semali okanye iarhente ethembekileyo yokuthengisa izindlu ukuze uphendule ngokufanelekileyo.
Sitshele, ngaba akukho lula ukurenta okanye ukuba nendlu? Okokuqala, amandla emarike atshintshe kakhulu emva kwe umthetho werhafu uyatshintsha zenziwa zabuya ngonyaka ka-2018. Nangona kunokubonakala ngathi sisicwangciso esifanelekileyo sokuthenga indlu, unokuphelisa ukuhlawula ngaphezulu. Ayithethi into yokuba ukuqeshisa akuzi kunye neendleko ezinxulumene noko kunye nomngcipheko ekubeni iindleko zerenti zinokuvela rhoqo ngonyaka.
Ngaphandle kweerhafu, iintlawulo zenzala, kunye neefizi ezihambelana nobunini basekhaya, kuya kufuneka wenze ukulungiswa okungahleliwe ongazukubona kuza. Kananjalo kuya kufuneka ubeke kwiindleko zefanitshala entsha, izixhobo kunye nokuphuculwa kunye nezinye izinto ezisetyenziswayo kunye nexabiso leinshurensi adla ngokuhlawulwa kwiintlawulo zerenti. Cinga usebenzisa ikhawuntari yokubambisa ukufumana ezo ntlawulo zongezelelweyo.
Cinga ngezi zibonelelo zilandelayo uya kuba nazo ukuba unokukhetha ukurenta njengenketho yakho yangoku:
Kutheni kufanelekile ukuba uqeshise ngerente kwiZindlu ezizezakhe
Ulondolozo kunye nokulungiswa koxanduva lokumiswa komnini ndlu.
Ukuncitshiswa kwamaphepha aneentlawulo ezimbalwa eziphambili.
Ithuba lokufumana ixabiso elifanelekileyo lokuthenga ngetyala ukuba umnini-ndawo wenza iingxelo kwiziko lokuthenga ngetyala (qinisekisa ukuba ufumana)
Iirhafu zerhafu yepropathi enkulu kwaye awuzukufunga ngenxa yokuwa kwexabiso lasekhaya.
Oku akuthethi ukuba indlu yerente ukuba ibe yeyakho ngumnini ayizukuza nezinye ezantsi. Oku kubandakanya:
Izibonelelo zerhafu yeZero, kwaye uyasilela nokwakha ubulungisa.
Izithuba zinokunciphisa umda kukhetho lwakho.
Ipropathi ingathengiswa ngexesha lomnini-ndawo okanye anyuse irenti, enokukuphazamisa kakhulu.
Isigqibo sokuphela kosuku konke kubuyela ezithandweni zakho. Xa uziva ukuba ugqibe kwisigqibo esipheleleyo, kuphela ke apho ungaba khona kwisigqibo sokuthatha isigqibo? Ngaba eli nqaku lingasentla likuncede ukunciphisa umthwalo wakho kwirente yendlu? Yabelana kwicandelo lokuphawula ngezantsi.
UKay Burton ngumlingisi wokuziqhelanisa nale minyaka ingamashumi amabini idlulileyo. Akafumananga kuphela iinguqu ezahlukeneyo kumzi-mveliso wokuthengiswa kweepropathi zorhwebo ngamanqanaba awahlukeneyo kodwa ukwabhile kwincwadi ethengisa kakhulu kubanini bamakhaya. Unika ulwazi ngakumbi kwiblogi yakhe ngokubhekisele kuyo nayiphi na into enento yokwenza nepropathi kunye nomhlaba.
exhonyiweyo Imali yezezindlu | ephawulweyo Ukuqeshisa vs Ubunini | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Matshi 5, 2020 by ashley
Gqi beliswa: Mar 5, 2020 09: 23
Iimfihlo ezi-5 zokuPhumelela ukuRhweba ngeeNdawo
Ukufumana iPropathi yakho Phambi kwabantu abaLungileyo
Umthengi ofanelekileyo inokwandisa inzuzo yakho. Ufuna ukusebenza kunye neearhente zezindlu nomhlaba, ngaphandle kwaxa ungavumi. Kuzo zonke iimeko zokuthengisa iipropathi, ukuthengisa iipropathi kunye nezinto ezahlukeneyo ziya kwenza ukhetho olufanelekileyo! Kwinto enokuthi ingalungelanga mntu unepropathi efanayo.
Ukufumana ibhalansi elungileyo kunokuba nzima. Unendleko zokuvala kunye neerhafu zokuqwalaselwa. Ukulandela siza kuhamba ngaphezulu kwamanyathelo amahlanu amafutshane anokukunceda ukuthengisa ngokufanelekileyo ngokuthengisa izindlu nomhlaba, ukwandisa inzuzo yakho.
1. Dwelisa iipropathi zakho ngeXesha elifanelekileyo malungaNtengiso yeNtengiso yePropathi
Kukho ixesha lokuthengisa izindlu nomhlaba kuluntu lwakho. Uninzi loluntu, eli xesha lonyaka liqala njengokuphela kwentwasahlobo, liphela lijikeleze iiholide. Okuba nomgangatho wobushushu noqoqosho ngakumbi kulo mmandla, lixesha elide kunexesha lokuthengisa kunye nomhlaba. Kodwa eLos Angeles ixesha liphela phambi kwekrisimesi.
Ngenzuzo, ufuna ukuba izinto zithengiswe in ixesha Oko kuthetha ukuba kudweliswe ekuqaleni kwesizini. Ukuba unokwenza olunye uphando lwendawo, oko kuyanceda. Iiarhente zeearhente zezezindlu nazo zinokusebenza njengabacebisi bakho-nangona kunjalo, baya kufumana ikhomishini ukuba ubabhukisha ukuze bakuncede uthengise.
2. Fumana i-honey-Do's kunye nokuLungiswa koLondolozo kuDweliso lwangaphambili
Uluhlu lwangaphambi koku, kubalulekile ukuba ulungise yonke imiba yakho propati ine. Ngaba ingca ayisihlaza njengoko kufanele ibe njalo? Nokuba ingabukeka ilungile, okanye iphinde ihlengahlengise imbonakalo yomhlaba wakho usebenzisa amatye, iikhuni zokhuni, okanye into efanayo. Tsala zonke iindonga. Guqula iifestile eziqhekeziweyo. Ukulungisa okanye ukubuyisela uphahla. Lungisa izixhobo. Beka imingxunya.
Nje ukuba wenze ezi zinto, okanye xa uphakathi kwazo, ufuna ukuqwalasela ukulungisa kwakhona. Ngamanye amaxesha uluhlu olupheleleyo lwe-remodel lwangaphambili lunokuba luncedo. Ngamanye amaxesha ufuna kuphela ukulandela utshintsho olunobuncinci-nantoni na ehambelana nohlahlo-lwabiwo mali, izixhobo kunye nobuchule. Unokufuna ukuphazamisa ukulungisa kwakhona okubucayi; usenokongeza eyakhayo.
3. Faka i-Intanethi- Sebenzisa iVidiyo
Ukuba umfanekiso uxela iwaka lamagama, ividiyo iyotshela isigidi. Ividiyo inika ababukeli umbono wobungakanani, umbala, umgangatho, ubudala, kunye nobuhle Kulula kakhulu ukwenza ukuba abantu bajonge ikhaya lakho ukuba sele ucacile, umgangatho wevidiyo wayo ubukhulu bengaphakathi. Imifanekiso ilungile, kodwa nge-smartphone namhlanje, ukwenza ngokukhawuleza ukuhamba kwaye uyithumele kwi-intanethi kunokuba ngumzuzu wemizuzu elishumi othengisa impahla.
4. Sebenza neearhente zeeNdawo zokuThengisa kunye neeNdawo eziZimeleyo zoDweliso
Iiarhente zeearhente zokuthengisa izindlu zichaziwe ngaphambili. Ngamanye amaxesha ukubheja kwakho okulungileyo kuluhlu kunye nabathengisi bendawo. Bayazazi izingeniso, indlela yokuthengisa ngokukhawuleza, kunye nendlela yokuqokelela ikhomishini. Ngokukhawuleza iarhente, iya kuba phezulu ikhomishini yabo. Nangona kunjalo, ungadwelisa iipropathi zakho ngokuzimeleyo usebenzisa iiwebhusayithi ezinje ngeZillow okanye iiCraigslist.
Ngenye indlela, ungadweliswa ngaphakathi ushicilelo lwasekhaya. Icandelo elichongiweyo lephepha-ndaba lifundwa ngabathengi abaninzi abanobutyebi. Ukuthatha intengiso ezimbalwa ngeeprinta zoshicilelo zasekhaya kunokuba yeyona ndlela inokuba yindleko kuneyona khomishini ye-realtor-kodwa inokuthatha ixesha elide ukuba impahla yakho ihambe.
5. Funa uthethwano kwaBahlobo, usapho, kunye nabaNgcali kwiNtengiso yeNtengiso yeNtengiso
Akukho nto inokuthatha indawo yothethwano lwasekhaya ngabantu obathembayo. Abanye abathengisi bezindlu banokuba ngabahlobo bakho, kwaye kwangaxeshanye bazimisele ukukunika ingcebiso yasimahla. Kwenzeka into efanayo nakwabaninzi bebhanki, abakwiindawo ezinokuthengiselana ngezezimali kwindawo yakho. Izixhobo ezikwi-Intanethi zinokukunceda. Amalungu ophumelele wosapho lwakho angabhetele.
Ukuthengisa iipropathi ngokukhawuleza, kwaye ngokufanelekileyo
Ukuvalwa kweendleko kungaphantsi njenge-1% okanye ukuya kuthi ga kwi-10% yexabiso lepropathi yakho-le ndawo Uluhlu olusasazekayo njenge-1% ukuya kwi-7%; kodwa iimeko ezahlukeneyo zivelisa iziphumo ezizakuhluka.
Izinto ezininzi ezilapha zimisela ukuba ulahlekelwe yimalini xa kuvalwa ipropathi yakho. Ungathengisa njenge-arhente ethenga iipropathi ezinqabileyo. Uyakuphulukana, kodwa ingxaki iya kuba sezandleni zakho ngokukhawuleza.
Ukwandisa Yimaluphi inzuzo onokuyifumana Ukusuka kwindawo yakho ethengiswayo, qhubeka phantsi kothethwano, ukulungisa ngokutsha nokulungisa izakhiwo kangangoko unakho, uluhlu ngexesha elifanelekileyo, sebenza kunye nabathengisi bezindlu xa kufanelekile, kwaye ujonge iindlela ezintsha zokuthengisa njengevidiyo. Indlela esekwe ngala manyathelo iya kukunceda uthengise impahla yakho ngokukhawuleza, ngexabiso elikhulu.
exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi, Ishishini lokuthengisa izindlu, Ukuthengisa izindlu nomhlaba | ephawulweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi, Uluhlu lweearhente zeZakhiwo kwi-Intanethi, Izicwangciso zokuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Matshi 4, 2020 by ashley
Gqi beliswa: Mar 4, 2020 13: 18
Ukuthengisa indlu ngeCash eFlorida? Yintoni omele uyilindele
Ukuthengisa indlu yinkqubo egcwele Inani lamanyathelo ahlukeneyo. Kuya kufuneka wenze uluhlu, ubonise ikhaya, usayine ikhontrakthi, wenze uhlolo kunye nezinye izinto ezininzi. Njengoko unokucinga, le nkqubo inokuthatha ixesha elide. Ngaphandle kwale nto, izigidi zabantu baseMerika bathengise izindlu zabo unyaka nonyaka.
Ngombulelo, akusoloko kufuneka ibe yinkqubo ende ebuhlungu thengisa ikhaya. Indlela enkulu yokuthengisa ikhaya lakho ngokukhawuleza kukuthengisa ngemali. Abathengi be-Cash ngokubanzi bafuna ukuhamba ngokukhawuleza. Ngenxa yale nto, inkqubo iya kuthatha iqhezu lexesha lokuthengisa kwendabuko. Ukuba uthengisa indlu yakho ngemali ezinkozo eFlorida, qiniseka ukuba ujonga eli khonkco ukuze ufunde ngakumbi malunga nokuba kungenziwa ngokukhawuleza kangakanani na ngokulula: Sithenga izindlu eFlorida
Nangona kunjalo, yintoni onokuyilindela xa uthengisa umzi ngemali? Wenza njani ukulungiselela kwaye uqinisekisa ukuba ufumana eyona ndibano ilungileyo? Unoko engqondweni, le bhloko yeblog iya kuhamba ngaphezulu kokulindeleyo xa uthengisa indlu ngemali eFlorida.
Lindela ukuHhamba kwiXabiso lokubuza
Ukuxoxisana kuxhaphake kakhulu ngexesha lokuthengisa kunye nepropathi, kwaye oku kuyinyani ngakumbi kwintengiso yemali. Kuya kufuneka ulindele ukuhla ngexabiso lokubuza kwiimeko ezininzi, ngaphandle kokuba ixabiso lakho lokubuza sele liphantsi kakhulu. Ukuthetha nge ebuza ixabisoQiniseka ukuba ubeka ixabiso elifanelekileyo lokubuza xa udwelisa ikhaya lakho ukuthengisa. Ngelixa ufuna ukuqiniseka ukuba ufumana imali eyoneleyo yekhaya, ukubeka ixabiso liphezulu kungakhokelela ekuhlaleni ekhaya kwimarike iinyanga.
Jonga ukuthelekiswa kwindawo yakho kwaye uqwalasele imeko yekhaya lakho ngaphambi kokubeka ixabiso. Kwakhona, ziqonde izinto ezifana nokuba isixeko sakho singabathengi okanye siyathengisa. Kububulumko nokwazi ukuba abathengi kwindawo yakho bafuna ntoni.
Lindela ukutshintsha iNkqubo yakho
Unokuba neshedyuli eqhelekileyo othanda ukuhlala kuyo, kodwa ulindele ukuba itshintshe kancinci xa kuthengiswa ikhaya. Abathengi bahlala bafuna ukujonga iipropathi xa zibasebenzela, ke kufuneka uguquke. Oku kubandakanya ukubonisa ikhaya lakho ngokuhlwa, ngeempelaveki okanye ngamanye amaxesha anokuhlala ungakulungelanga.
Oku kuyinyani ngakumbi xa kuziwa kuthengiso lwemali. Abo bathenge amakhaya ngemali ezinko-nkqo bafuna ukuhambisa inkqubo ngokukhawuleza, ke kuya kufuneka ukwazi ukuqhubeka. Ukuba awukwazi ukwenza umsebenzi wokubukela ngexesha elithile, banokufumana omnye umntu onokuthi. Ngenxa yoko, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ugcine umboniso wekhaya lakho ulungile ukuze ulungele ukuthatha uhambo ngesaziso somzuzwana.
Lindela uhlobo oluthile lomthengi xa uthengisa indlu
Isininzi sabantu abathenga amakhaya baya kwenjenjalo ngento yokubambisa. Ngelixa zibaxabisa ngaphezulu ekuhambeni kwexesha kunokuhlawula nje ngemali, kudla ngokuba lula ukuphatha iintlawulo zenyanga kunokuyeka imali enkulu ngaxeshanye. Ngenxa yoko, kuya kufuneka ulindele uhlobo oluthile lomthengi xa uthengisa ikhaya ngemali.
Ngokubanzi, iinkampani zeearhente zezindlu nomhlaba, abantu abajonge ukuntywila amakhaya okanye abo bafuna iipropathi zokurenta baya kuba zezona ntlobo ziqhelekileyo zabantu abanomdla wokuthenga izindlu ngemali. Bafuna ukwenza eli nyathelo lenkqubo lenziwe ukuze baqhubele phambili ngokukhawuleza.
Ukuqukumbela, siyathemba ukuba ulwazi olukweli nqaku lukwazile ukukunceda ufunde ukuba ungalindela ntoni xa kuthengiswa indlu ngemali.
exhonyiweyo Ukuthengisa izindlu nomhlaba | ephawulweyo ukuthengisa indlu, ukuthengisa indlu ngokukhawuleza, Ukuthengisa izindlu nomhlaba | Ushiye uluvo |
Gqi beliswa: Mar 4, 2020 10: 02
Ngaba kufanelekile ukuthenga i-inshurensi yexabiso eliphantsi?
Umbuzo oneempendulo ezininzi
I-inshurensi yexabiso eliphantsi inokukugcinela imali, kodwa inokubiza neendleko. Ixesha elide kunye elifutshane le-inshurensi yexabiso eliphantsi yile: iimeko ezahlukeneyo zifuna izisombululo ezahlukeneyo. Umzekelo, ukuba useMantla Dakota, endulini, kude kuyo nayiphi na into enamanzi, amathuba ezikhukula awekho. Usenokungaze uthenge nayiphi na i-inshurensi yezikhukula.
Nangona kunjalo, ukuba useLouisiana kwaye awunayo i-inshurensi yezikhukula, ucela ukuba ipropathi yakho inyanzelwe kwenye indawo ehlathini. Nangona kunjalo, ayizizo zonke i-inshurensi ezenziwe ngokulingana. Ezinye iinkampani zeinshurensi ziya kwenza konke okusemandleni ukukhusela ukubonelela abo bakulungeleyo ukuhlawula ityala.
Iinkampani zeinshurensi zenza oku ngeendlela ezininzi: ziya kulibazisa intlawulo, ziya kuphikisana amabango, ngamanye amaxesha ziya kwenza ngathi zilahlekile amaphepha-kukho amaqhinga amaninzi apha Iifemu zomthetho xa zizonke zenza imali yazo ukukhusela abo bahlawulwe ngamaqela einshurensi. Nangona kunjalo, kukho ababoneleli beinshurensi abalungileyo apho.
Ubunzima buza ekufumaniseni ukuba ngubani "kwi-zoo", njengoko isitsho. Uxelela njani ukuba iphakheji ye-inshurensi engabizi kakhulu iya kukukhusela ngaphakathi Umsitho wengxamiseko? Ewe, oku kubhalwa kuya kuhamba ngeendlela ezimbalwa zokufumanisa ukuba.
Ukuchonga ukuba uMboneleli weinshurensi yoNogumbe unokuThembela ku
Kufanelekile ukuthenga i-inshurensi yexabiso eliphantsi ukuba iyinshurensi elungileyo, okanye ukwimeko encinci. Kubi ukuyithenga ukuba ukwindawo esemngciphekweni omkhulu, kwaye awunakuthembela kumboneleli weinshurensi. Emva koko uya kufuna ukhetho oluthembekileyo. Abanye babaninimzi bakwiindawo ekungenakwenzeka ukuba umkhukula ubenako, ngenxa yoko bahamba ngenketho yedola esezantsi, kwaye isebenza kakuhle kwizizukulwana.
Abanini bamakhaya abaninzi abakwazi ukufikelela ngaloo ndlela kwiimpembelelo zesaqhwithi sesaqhwithi. Ukuba ubuseFlorida kufutshane nomnye wonxweme, izimemo zomshuwalense wezamanzi ukonakala kwesaqhwithi. Ngokuhambelana, abaphandi beenkampani zeinshurensi bakwi-intanethi. Zithini izimvo? Yintoni i- "scuttlebutt"? Buza ngeenxa zonke, ubone ukuba abantu abasebenzisa iinkampani ezinjalo bathini.
Ngapha koko, unokufuna ukubonisana, okanye udlule kwiqela eligciniweyo ukwenza isigqibo sakho. Iiarhente ezibekwe kule ndawo ziyaziwa ukuba zikhusela ngokufanelekileyo iimfuno zabathengi ababasebenzayo.
Ukulungiselela iPropathi yakho
Enye into enokuthi ixabiseke kukongiwa ekhaya. Ngelixa kukho iimeko ezithile zemozulu apho kungenakwenzeka ukuthintela ukukhukuliswa, oku akusoloko kunjalo. Ukuba awunamdla kwi-inshurensi konke konke, unokusebenzisa imali onokuyisebenzisa ekukhuseleni ukomeleza indlu yakho kwiintlekele ezinokubakho.
Ukuba uthathe isigqibo ukufumana i-inshurensi okwangoku, ungafumana inqanaba elingcono, kwaye kunokuba nethuba elingcono lokubona isisombululo kwimeko yexesha likaxakeka.
Ubumelwane kunye noNcedo
Enye into onokuthi ujonge kuyo ngummelwane apho ufuna ukuthenga ipropathi, okanye indlela okhethwe ngayo ngoku. Ukuba sele ndinekhaya, olu lwazi lusabalulekile. Ngamanye amaxesha ukwindawo enamathuba amaninzi okugcwala. Imbali iyabonisa oku. Ukuba awukhange uqaphele ukuba ude wenze uphando, kunokuba yinto efanelekileyo ukuqwalasela ukuthengisa.
Ukongeza, ukuba uthengisa kwikhaya, unokufuna ukuqwalasela ngobunono bemeko yezikhukula ngaphambi kokuba uthenge ipropathi. Inye into eqinisekileyo: iipropathi ezaziwa njengezikwindawo ezinobungozi zinokubiza kancinci. Kwakhona, le ayisiyonto iyafana kwibhodi iphela, kodwa kufanelekile ukuba kuqinisekiswe ngaphakathi.
Enye into ekufuneka ibonwe kuyo linokwenzeka lokukhululeka korhulumente. Ngamanye amaxesha indawo ayizukugcwala ngaphandle kokuba enye engalindelekanga ngokwenene, "Act of God" yehlelwe yintlekele. Kwimicimbi enjalo kukho ngokubanzi Iiarhente zikarhulumente ezinokunceda abo bachaphazelekayo ukuba baphinde baphila kwizinto abazinyamezeleyo.
Ukwenza Olona Khetho lubalaseleyo lwe-Inshurensi yeZikhukula
Ngobonelelo ngononophelo ababoneleli beinshurensi, ulungisa ipropathi yakho, kwaye ukhethe ezona ndawo zingcono ulungiselela ikhaya lakho ngomkhukula, kwaye uphephe ekubeni ungafakwanga kwaphela xa kungafunwa mntu.
Ukongeza, amanyathelo anjalo anokubaluleka kukukunceda ufumane umboneleli weinshurensi efanelekileyo. Inokuba luncedo ukufumana i-inshurensi yexabiso eliphantsi, kodwa isenokungabi ndim. Kuxhomekeka kwimeko. Thatha ixesha lakho, umnxeba ujikeleze, kwaye ufumane ulwazi oluchanekileyo njengoko unokwazi kwangaphambili ukwenza ukhetho olufanelekileyo.
exhonyiweyo Imali yezezindlu | ephawulweyo Indlu eneZikhukula, inshorensi, Izindlu ezithengiswayo | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Februwari 28, 2020 by Amelie Lawrence
Gqi beliswa: I-Feb 28, 2020 09: 06
Izinto eziluncedo ezinokufumaneka ngokupeyinta kophahla kulwakhiwo lwasekhaya
Uphahla lwesakhiwo luhlala lushiywe kude nangona lenze owona msebenzi ubalulekileyo wokukhusela ingaphakathi lasekhaya kwiimvula, ukuwa likhephu, isaqhwithi, kunye namaqondo obushushu agqithisileyo. Ke, uphahla lwendlu yakudala kufuneka lubuyiselwe kwimeko yayo yasekuqaleni, ngokudibanisa iithayile zophahla ngepeyinti efanelekileyo. Nangona kunjalo, ukupeyinta kophahla kufuneka yenziwe kuphela ziingcali zeengcali, ukuze zifumaneke zonke izibonelelo zokugada uphahla lonke. Ngokukwanjalo, iipende ezisemgangathweni ezilungileyo mazisetyenziselwe ukufumana iziphumo ezinqwenelekayo kunye nezide.
Iimpawu eziphambili zepeyinti yophahla kubanini bezindlu
Yandisa ixesha elide kophahla - Xa iithayile zophahla ezindala zidityaniswa ngopende obonisa okhethekileyo, uphahla kulindeleke ukuba luqhubeke ubomi obude. Ukupeyinta kophahla kukhusela iithayile kwaye azichaphazeleki kakubi yimitha ye-UV kunye nezinye izinto zangaphandle. Kukho ithuba elincinci lokuvuza ukusuka kwezi tile zophahla ezipeyintiweyo, ukunciphisa iimfuno zokutshintshwa kwetayile. Kuyabonakala ukuba uphahla olupeyintiweyo luhlala amashumi eminyaka, ngokuchasene neethayile zophahla ezingafakwanga zonakaliswe ngokukhawuleza.
Inceda uphahla lukwazi ukumelana nemozulu eqatha - Kuba iithayile zophahla zidityaniswe ngopende ongangenisi manzi, amanzi emvula akanakunyathela ngaphakathi kumagumbi nangawuphi na umqhekezo owenziwe kumphezulu weetayile. Ezi zambatho zepeyinti zenza ukuba iithayile zikhule kwaye ziqine ngokuqinileyo kumandla oqhwithela kunye nesichotho, ngaphandle kokujongana nomonakalo. Nokuba iithayile zensimbi zophahla azikwazi ukuthoba okanye ukunwebeka ngenxa yeenguqu kumaqondo obushushu asemoyeni, ngenxa yendlela yokunxiba yepeyinti.
Ukuncipha kokusetyenziswa kwamandla ekhaya - Ingaphakathi lendlu lihlala lipholile kakhulu ehlotyeni kwaye lifudumele kamnandi ebusika, ngenxa yepeyinti efanelekileyo yophahla. Ngokwesiqhelo, iipeyinti ezimhlophe okanye ezinombala okhanyayo zinokufumana ubungakanani obushushu belanga ngexesha lehlobo kwaye zithintele ukubaleka kobushushu bangaphakathi ebusika. Ngenxa yoko, kukho isidingo esincinci sokucima ukupholisa ngombane okanye izixhobo zombane, ukonga isixa esikhulu samandla ombane kubomi bemihla ngemihla. Oku kusebenza kwamandla kwamandla kophahla olupeyintiweyo kugcina imali eninzi kumnini wendlu, ngokunciphisa iintlawulo zombane zenyanga. Ke, kukhethwa ukuba kusetyenziswe izithunzi ezilula zokupeyinta ngaphezulu kobumnyama, ukuba zipeyinte iithayile zophahla.
Ukuphucula ubuhle bendlu - Indlu enophahla olusandul 'ukupeyintwa ibonakala intle. Olu luhle lobuhle luxhomekeke ekukhetheni kombala wepende kunye nomgangatho wepende, ukufumana ukukhanya okongeziweyo kwiithayile ezindala zephahla. I-aesthetics yayo nayiphi na indlu inokunyusa ixabiso lokuthengisa kunye nepropathi. Ke, ukupeyinta kophahla linyathelo elifanelekileyo elinokuba yingenelo kumnini ndlu xa efuna ukuthengisa ipropathi yakhe.
Uthintela ukwakheka kwethamba - Xa iithayile zophahla zihlala zifumile ngenxa yemvula, ikhephu okanye ukungalunganga, kusenokwenzeka ukuba ikalika, ityholo kunye nomphunga zingakhula ngaphezulu kwale ndawo imanzi. Ngelixa isikhunta kunye nomaleko okhula eluphahleni unokuba yingozi kubahlali belo khaya, iingcambu zeel lichens kunye nolwelwe zinokubangela ukuvuza kophahla. Ukupeyinta kophahla okufanayo kungathintela ukukhula kwezi zinto zisindisa impilo yekhaya kunye nabantu abahlala apho.
Ngokubanzi, uphahla lwezindlu zokuhlala lwenziwe ngekhonkrithi, iithayile zentsimbi okanye iitracotta, ezinokupeyintwa ngokulula. Yaziwa kwakhona iinkampani ezibonelela ngeenkonzo zokupeyinta eluphahleni kufuneka kuqhakamshelwe, ekufuneka ibe negama elihle kwimarike kunye namava awaneleyo kule ndawo. Ixabiso lale nkonzo lixhomekeka kwimeko yophahla, uhlobo lwezinto ezisetyenzisiweyo ekwenzeni olo uphahla, kunye nobungakanani bophahla.
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo Ukupeyinta kophahla | Ushiye uluvo |
Gqi beliswa: I-Feb 28, 2020 06: 41
Izibonelelo zokusebenzisa ikhonkrithi kwiipropathi zorhwebo
Ukusetyenziswa kwekhonkrithi kwiipropathi zorhwebo kukhetheka ngenxa yezibonelelo zokusingqongileyo nezemali ezihambelana noko. Ikhonkrithi ihlala ixesha elide kwaye ayisebenzi. Ngaphezu koko, ukuba ufumana nayiphi na yomonakalo kumphezulu wakho wekhonkrithi unokulungisa okufanayo ngexabiso elincinci kwaye awudingi kuthwala iindleko zokulungisa ubunzima bakho kumgangatho wekhonkrithi okanye kudonga. Ungasebenzisa izixhobo zekhonkrithi kwiindawo zakho zorhwebo, kwaye ungafaka iindlela zekhonkrithi kwindawo yakho yangaphandle. Banokukuthwala kakhulu ukugcwala kwezithuthi kwaye bayathandeka ngokupheleleyo.
Zeziphi izibonelelo zokusebenzisa ikhonkrithi kwiindawo zorhwebo?
Nalu uluhlu lwezizathu eziphambili zokuba kutheni kufuneka usebenzise ikhonkrithi njengeyona nto ithandwayo yokwakha yokwakha izakhiwo zorhwebo kwihlabathi liphela. Qhubekeka ukufunda →
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya, Yard kunye neGadi | ephawulweyo Ukhonkco, Indlela yokukhonkrisha ikhonkrithi | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Februwari 25, 2020 by U-Evan Javier
Gqi beliswa: I-Feb 25, 2020 12: 15
Izizathu ezi-4 eziPhakamileyo zokwenza iiNkqubo zokuPholisa eziXineneyo ziKhetheke ngaphezu kweeMeko zoMoya
Ii-coolers ezipholileyo ziya kuhlala zikhethekile ukukhetha imozulu ixesha elide ngoku. Isizathu soku yile ukupholisa okuphumayo Isixhobo sinika iitoni zeenzuzo xa kuthelekiswa nasiphi na isixhobo somoya wokuhambisa umoya. Ngokukodwa, iindawo zokupholisa ezivuthuzayo zenza ukungcola okumbalwa kwisibhakabhaka. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba sixoxe ngezibonelelo ezinikezelwa ngabapholileyo ukuba bathathe ukhetho olunokukhethwa, siya kuthetha ngesixhobo kunye nomatshini waso.
Amagqabantshintshi ngenkqubo yokupholisa evaporative kunye ne-coapers evaporative
Ukupholisa evaporative kubandakanya inkqubo yokupholisa, ethatha isibonelelo sobushushu bashushu obufunyenweyo Qhubekeka ukufunda →
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo Ukuphola komoya, Ukupholisa okucaphukisayo Greensborough | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Februwari 24, 2020 by okwenyaniWW
Gqi beliswa: I-Feb 24, 2020 17: 22
Iingcebiso ezi-5 eziyimfuneko zokuLungelelanisa ukuHlala kwePhaseji
Wonke umntu ohlala eflethini uza ngapha kwemiceli mngeni yokuhlala ecaweni yomnye umntu. Ukuba awuzange uhlala kwisakhiwo esisefulethi kukho izinto ezithile obungazilindelanga. Amanzi ngamanye amaxesha ahamba ebandayo eshawini? Imeyile ayizukuhanjiswa ngokuthe ngqo emnyango wakho kwakhona? Imibuzo ongazange uzibuze yona ngaphambili inokuvela. Okukhona uyazi into yokulindela utshintsho oluza kuba lula. Yiba nezi ngcebiso zilandelayo ngaphambi kokutsiba kwigumbi lakho elilandelayo.
Ingcebiso yoku-1: Yakha ubudlelwane obunempilo kunye noMnini-mhlaba
Ukuhlala kwipropathi yomnye umntu kuza nemisebenzi yakhe. Awukwazi ukupeyinta iindonga nayiphi na imibala eqaqambileyo oyinqwenelayo, i-lawn yakho kufuneka ijongeke icocekile kwaye igcinwe, kwaye awuzukwazi ukuba nezilwanyana ezifuywayo. Nokuba yeyiphi na imeko onokuzifumana ukuyo, into enye iqinisekile, ubudlelwane bomnini-ndlu obuphilayo bubalulekile kwimeko elungileyo yokuhlala.
Qiniseka ukuba uhlala uhlawula irente yakho ngexesha kunye nokugcina usempilweni umyinge werenti-kwengeniso ukwenza ukuthembeka kwakho. Oku kuyakukhulisa ukuthembana kubudlelwane bakho kwaye sikubone njengokwethembekileyo kwezemali. Soloko uqinisekisa ukungafihli nto. Ukuba unyanisekile kumnini-mhlaba ukuba ngumnini wenja okanye umntu ongezelelweyo ukuhlala nawe, akukho ndawo iya kubakho. Xa uqala ukufihla izinto imeko iba nenkohliso kwaye unokukhawuleza uwele emazantsi. Okona kubaluleke kakhulu, qinisekisa ukuba ufumana yonke into ebhaliweyo. Ukuba unemicimbi, ufuna uncedo lolondolozo, okanye ufuna ukunxibelelana kusoloko kukhuselekile ukuthumela i-imeyile ukugcina irisithi yencoko.
Ingcebiso 2: Gcina Amandla
Ukuhlawula amatyala okusetyenziselwa ukwenza izinto kunokwenzeka ukuba uhlala kwindlu. Ngaba lithuba elinqabileyo kakhulu xa irente yakho igubungela amatyala akho okusebenzisa kunye nezinye izibonelelo. Ukunciphisa ityala elibiza inyanga nenyanga, hlala usazi ngokusetyenziswa kwamandla. Thatha amanyathelo okuncedisa iplanethi yakho kodwa kunye nokunceda isikhwama sakho.
Qala ngokutshintsha ukukhanya kwizindlu zakho. Ukuba indawo yakho ayifiki ngembane ezilula zokukhanya kufuneka uthenge ezinye ukuze unciphise i-akhawunti yakho. Le yindlela elula yokunqanda ingxaki yeendleko ukuba ingakhuli. Uya kufuna kwakhona ukukhupha umbane xa ungasetyenziswanga ekusebenziseni amandla kwaye ekubeni lo "phantom" umthwalo wamandla. Ukongeza, zama ukunciphisa ixesha lokuhlamba ukuze unciphise ityala lakho lamanzi. Qhubeka nokukhangela iindlela ezintsha zokunciphisa umda wokusetyenziswa kwakho kuba izinto ezincinci zikholisa ukongeza ngokukhawuleza xa uhlala eflethini.
Icebiso lesithathu: Kwenze ikhaya lakho
Xa uqala ukuya endaweni yakho kunokuba nzima ukuyenza ivakale ngathi likhaya. Ukuchitha isithuba sakho kuyakwenza ukuba kube sekhaya kwaye kumnandi ukugqiba usuku lwakho. Cinga ngoluhlu lwezinto ezibalulekileyo ongathanda ukutyala imali kuzo. Mhlawumbi isofa elifanelekileyo libalulekile kuwe okanye iragi efudumeleyo efudumeleyo iphakamileyo kuluhlu lwakho oluphambili. Cinga ngayo yonke into oyifunayo ukuze wenze indlu yakho ibe yindawo yakho.
Sebenzisa izibane, amakhandlela, okanye isibane esikhanyisayo ukuze usete ithoni kwigumbi lakho lokuhlala. Umbane unokwenza ifuthe lokunyanzelwa kwindawo yommandla. Hambisa ubugcisa kwaye ubonise ezinye iifoto zosapho kunye nabahlobo ukwenza indawo yakho ephambili. Kwigumbi lokulala, phanda indawo ethe tyaba kwaye ubonise iimesos eshelfini yakho. Ezi ndawo zimbini ziya kufuna ingqalelo ikakhulu kuba uza kuhlala kuzo. Ukulungisa indawo kwindawo yakho kungabonakala kungabalulekanga ekuqaleni kodwa ukuza ekhaya kwindawo engaziva ngathi yahlukileyo kuwe ayisiyiyo imvakalelo efanelekileyo emva kosuku olude.
Ingcebiso yesine: Tyala imali kwisitoreji
Ukurenta indlu kuthetha indawo encinci! Kuyabonakala kwasekuqaleni ukuba awuzukukhululeka kangako ukuba ungcungcutheke okanye ungakhathali ngezinto zakho xa kungekho sithuba saneleyo sokuvumela oko. Nika lo mbandela iodolo kwaye utyale imali kwisitoreji sengqondo. Izinto zokufihla ayilungisi ingxaki, yibambe entloko kunye nohambo oluya kwisitoreji sakho sasekhaya.
Uya kufuna ukuqala ngezitulo ezonakeleyo. Oku kunokubonakala kunzima kancinci ekuqaleni kodwa, bayabiza kwaye bayakuvumela ukuba ugcine izitulo kwiindawo ezincinci. Unokutshala imali kwezinye ezona zilungileyo kamva, kodwa ezi zikunika umbono malunga nendawo omele usebenzisane nayo kunye nendawo ofuna ukubonakala kuyo. Yongeza amashalofu kuyo yonke indawo. Ukushenxisa isenokuba ngumhlobo wakho osenyongweni ukuba unazo iincwadi ezininzi, iikeyikhi, okanye izinto ezincinci. Inani elifanelekileyo lamashalofu liya kunika izinto zakho ezincinci indawo ekhethiweyo kunye nendawo entle yokubonisa. Fumana iindlela ezifanelekileyo zokucwangcisa impahla yakho. Emva kwecango lokubamba ucango kunokuphinda kabini njengendawo yokubeka iisokisi zakho, iikipa, kunye nezinto ezingqubuzanayo.
Ingcebiso yesi-5: Qeqesha isilwanyana sakho sasekhaya
Ukuba ungumnikazi wesilwanyana sasekhaya, uninzi lwendlu luqhekekile kwaye luqeqeshelwe ukuvuthwa. Nangona kunjalo, ukuba ufuduka kwindlu ngeyadi, isilwanyana sakho sasekhaya sinokufumana ixesha elinzima lokuxhamla ubomi ngaphakathi. Igumbi alinandawo ininzi yomhlobo wakho olungileyo kunye, ngenxa yoko kuya kufuneka uye kuqeqesho olulungileyo. Qokelela izixhobo kunye nabahlobo kunye nosapho abanezilwanyana zasekhaya ezifuywayo. Buza malunga neengcebiso okanye izingqinisiso kubaqeqeshi abaziwayo.
Ukuphula indlu isilwanyana sakho kubalulekile xa uhlala efulethini, ufuna ukuphepha naliphi na ibala eliqaphelekayo kwiikhaphethi kangangoko kunokwenzeka. Ukuba isilwanyana sakho sinelizwi kakhulu kwaye sithande ukukhonkotha okanye senze ingxolo rhoqo, ukuba nomqeqeshi okanye ikhamera kuyakufuneka xa ungekho ekhaya uyokuthula. Ezinye izindlu zinemithetho engqongqo yezilwanyana ezibuthathaka ezinokwahluka ukusuka kwinto entle ukuya ekugxothweni. Ukongeza, ukuthabatha isilwanyana sakho kangangoko kunokwenzeka kuya kuba yimfuneko ukuba unesilwanyana esikhulu esidinga indawo. Oku kuyakunceda ukukhulula amandla kunye nokukhusela nayiphi na ifenitshala yakho ukuba itshatyalaliswe okanye iindonga zonakaliswe.
Ukuhlala kwigumbi lokuhlala luhlengahlengiso lomntu ongakhange ajongane nale meko yokuphila yodwa. Ungaphantsi kwemithetho yomnini-ndawo okanye umphathi wepropathi kwaye ngoku kufuneka uziphathe kakuhle ukuze uphile kwindawo yakho entsha. Khumbula ezi ngcebiso ukwenza utshintsho lwakho lula xa usiya kwinqanaba elitsha.
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo Ihostela | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Februwari 22, 2020 by okwenyaniWW
Gqi beliswa: I-Feb 22, 2020 21: 04
Iindlela ezi-5 ezidumileyo zoHambo lweNgaphakathi luka-2020
Yeyiphi indlela yangaphakathi eya kulawula i-2020? Ngaba indalo iya kuba sisiseko somtsalane? I-2020 ingangqina iinguqu ezininzi kumziyilo woyilo, kwaye uyilo lwangaphakathi alungafani. Iindlela ezininzi ezintsha zisekupheleni.
Unokunika ukujonga okutsha kwigumbi lakho elingaphakathi ngaphandle kokuchitha kakhulu. Eli lixesha elifanelekileyo lokwenza uhlaziyo oluthile ukuze ubonakale ebantwini.
Ngokuqinisekileyo, uninzi Indlela entsha yangaphakathi iyakutshintsha indlela yangaphambili. Sihlise phantsi ukhetho kwimiyilo emihlanu edumileyo. Jonga kwaye emva koko uthathe isigqibo sokuba yeyiphi na imikhwa eya kulungela enye uyilo lwangaphakathi ekhaya.
Kodwa ungazinqandi ngaphakathi kolu loyilo kuphela. Kuya kufuneka uphonononge ukufumana ezinye izinto zoyilo ezinomtsalane.
Indalo kwigumbi lakho lokuhlala
Imilo yangaphakathi yokuyila iya kuba yindalo-yodidi ngo-2020. Ubunewunewu beparadesi buya kudityaniswa zizinto ezininzi zendalo kunye nezinto ezifudumeleyo. Ukuba uyayithanda uyilo olunobuhlobo kokusingqongileyo, unokuzama izinto ezininzi ezintsha ukunika ukubukeka kwendalo kunye nokukhuthaza ukujonga ngaphakathi.
Iinkuni zendalo ziya kuba kokongezwa okugqibeleleyo. Ungayidibanisa neendidi ezahlukeneyo zezinto ezenziwe ngamatye anje ngegranite, iibhlog, kunye nemarble. Zonke ezi zinto ziya kuhambelana kwaye zifane nezinto zendalo. Nanini na apho kufanelekileyo, cinga ngokusebenzisa ifanitshala ephindiweyo neyenziwe ngesandla ukuze ibe ngcono ngakumbi.
Iziko lokucima umlilo
Iziko lokucima umlilo Unokunika uchukumiso lwale mihla kwikhaya lakho lakudala. Khawufane ucinge, uya kuba nezinto ezininzi zendalo ekhayeni lakho, kwaye kuya kubakho indawo yomlilo kwiziko. Uya kuyithanda imbonakalo kwaye uzive. Unokonwabela umlilo ngobusuku basebusika ngelixa ujikelezwe zizinto ezininzi zendalo.
Olu longezo lunokuba lolona lungcono ukonwabela indawo yakho kwiimeko ezimbi zemozulu. Onke amalungu osapho lwakho aza kuyithanda le ndlela yokuyilwa kwangaphakathi. Kwakhona, iindawo zokucima umlilo ziya kunika imvakalelo yokudideka kwindawo yakho yokuhlala.
Ungasebenzisa naziphi na izinto ozithandayo, kubandakanya isitena, amatye, okanye ifux, ukwenza indawo yakho yomlilo. Ingaba yindawo ekugxilwe kuyo kwigumbi lakho lokuhlala okanye iholo. Unokongeza i-ins-ins okanye i-shiplap ejikeleze indawo yakho yomlilo ukuze ujonge ngokupheleleyo. Ezi zinto ziya kuhambelana.
Izibane zeWall yanamhlanje
Xa kuziwa kukukhanya, unokukhetha iindlela ezinqwenelekayo zesitayile. Olu luyilo luchukumisayo kwaye aluyi kuthatha indawo eninzi. Unokongeza eli nqaku kwindawo engaphantsi kwendawo yetafile.
Ezi sconces zanamhlanje kunye nezibane zodonga ziza kunye ne-matte egqityiweyo. Oku kukwafumaneka ezingalweni eziguquliweyo ezingaphezulu ukunika imbonakalo ekhethekileyo kwingaphakathi lakho. Xa zikhethwe ngokuchanekileyo, ezi zibane zenziwe ngendlela ekhethekileyo zinokunika imbonakalo efanelekileyo kwangaphakathi kwendlu yakho.
Umnyama uza kubuya
Imnyama iya kuhlala ihlala iyenye yezona zinto zithandwayo zangaphakathi zoyilo ngonaphakade. Uninzi lwethu alunakuhamba emnyama. Nokuba abaqulunqi bangaphakathi abanamava bazama mnyama ukuba bafumane into enobuchule kunye neyilayo evela kwi-hue endala emnyama.
Ifenitshala emnyama, ukulungiswa, iindonga, kunye nokugqitywa okumnyama kuya thatha indawo yokuyila ngaphakathi. Ukuba ucwangcisa ukongeza into emnyama, akunakufuneka uphinde ucinge kwakhona. Qiniseka nje ukuba uyilo luhonjisiwe kwaye luhambelana nolunye ulungiselelo lwekhaya lakho.
Ukuba ujonga ezinye iindlela ezintsha ezimnyama, unokujonga iindonga ezimnyama. Ewe, iindonga ezimnyama zinokuba yingxelo yesitayile ngelixa zinika ukubukeka okunamandla kwaye okunomtsalane. Ukuba awukhethi bumnyama kuphela, ungadibanisa kunye nemibala ekhanyayo. Imibala eyahlukileyo inokunyusa inkangeleko kunye nobuhle bendawo yakho.
I-accents eluhlaza ezifana nemibala yomhlaba kunye nezinto ezizezinye ziya kuba yenye yeendlela ezithandwayo zangaphakathi zokuyila ngo-2020. Ezi zikwayilooempawu ziqwalaselwayo ngo-2019. Imo efanayo iya komelela kulo nyaka. Ungasebenzisa i-succulents kunye nezityalo zokuhlobisa ukongeza i-greenery ekhaya lakho.
Unokuzama nayiphi na okanye uninzi lwezi zinto zangaphakathi zoyilo. Khetha iindlela zokuyila ezibonakalisa ubuntu bakho kwaye unike ukubonwa okuthe ngqo kunye nokwangoku kokuyilo lwangaphakathi.
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo Ukulungiswa ngaphakathi | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Februwari 21, 2020 by NguLuka Hancock
Gqi beliswa: I-Feb 21, 2020 17: 21
Zeziphi ezona ndlela zilandelayo zokulahla inkunkuma kwiProjekthi yokuSusa iKhaya?
Ukuqala iprojekthi yokuvuselela ikhaya elitsha kunokuba lixesha elinomdla, kodwa kunokubangela nexhala. Zininzi izinto zokuthatha ingqalelo njengohlahlo-lwabiwo mali lweprojekthi yakho kunye nokuba zeziphi izixhobo kunye neenkonzo oya kuzifuna. Kuya kufuneka uphinde ucinge malunga nento oza kuyenza ngayo yonke inkunkuma eveliswe kwiprojekthi yakho. Nazi ezona ndlela zokulahla inkunkuma ngenxa yeprojekthi yokulungisa amakhaya ngo-2020.
I-Pickup yakho kunye nexesha lakho
Ngeprojekthi encinci, abaninimzi abaninzi baya kukhetha nje ukuthatha uhambo lokuzifakela ngokwabo kwilori yabo yokuhamba okanye abo babolekileyo kwilungu losapho okanye umhlobo. Oku kunokubonakala njengengcinga elula, kodwa kunokuba nzima ngakumbi ukuba kufuneka wenze iindawo ezininzi zokulahla inkunkuma.
Kukuchitha ixesha kwaye kuyadinisa kwaye kungonakalisa iveki yakho ukuba kuya kufuneka ubaleke kakhulu. Ngaphandle kokuba unganako konke inkunkuma yakho kwiprojekthi yakho kumthwalo omnye kunye nomhlaba wokugcwalisa ubekwe kwikhaya lakho, asikukhuthazi oku.
Ukuba ufuna ukusebenza ngeprojekthi ngexesha lakho kunye nesantya esikulungeleyo, ukuqesha i-dumpster yeyona nto inokwenzeka. Ngumbono okhangayo kunye nalowo ufuna ubuncinci bomsebenzi nguwe.
Inkampani ehambisa i-dumpster kwindlela yakho yokuhamba, uyigcwalisa ngaphandle kokushiya ipropathi yakho kwaye bayayithatha xa igcwele. Yintoni eyoyika abantu abaninzi kude kolu khetho kukuba bacinga ukuba luya kubiza kakhulu. Xa kuthelekiswa nokuqeshwa kwenkampani yokususa okungenamsebenzi Ukuba ufuna ukuba nenkampani yokususa i-junk yenza amatyeli aliqela kwindawo yokugcwalisa iindleko iindleko ezinokongeza ngokukhawuleza.
Ukuqesha i-dumpster kwiveki enye okanye ukuqeshisa ukutsiba kuneendleko ezahlukeneyo, kuxhomekeka kwindawo yakho. Amaxabiso ale nkonzo ngokuqinisekileyo ayahluka kuxhomekeka ukuba uhlala phi emhlabeni. Ukuqesha i-dumpster e-Elgin Illinois iyakubiza ngeendlela ezahlukileyo kunokuthi uqeshe ukutsiba e-Brighton England. Ixabiso lokurenta kwakho lixhomekeke ekubeni ingakanani iindleko zokukhupha inkunkuma kwindawo yakho yokugcwalisa komhlaba okanye kwisikhululo sokutshintshela. Kodwa, ukuba ulindele inkunkuma eninzi kunendlela yakho yokulungisa ikhaya yeyona nto ibiza ixabiso elincinci nelona lifanelekileyo ngokuchasene nokuqesha inkampani yokususa okungenamsebenzi.
Inkampani yokuSusa i-Junk
Olunye ukhetho oludumileyo kubanini bamakhaya abakhangela ukulahla inkunkuma okanye i-junk ukusuka kwindawo yokucoca intwasahlobo okanye iprojekthi yokulungisa ikhaya kukuqesha inkampani yokukhupha imitya. Zininzi iindlela ezahlukeneyo okhetha ukuba le yindlela oyikhethayo, kubandakanya iinkampani ezinkulu kunye nokusebenza kwendoda enye onokuyikhangela kwiiakhawunti zakho zeendaba ezentlalo. Ezi nkampani zizibhengeza ngokwazo njengeyona ndlela ingabizi kangako yokukhutshelwa kwejunk, kodwa iindleko zazo zinokuqwalaselwa xa ufuna ukuba zenze ngaphezulu kohambo olunye lokuhamba emhlabeni.
Zikhethe kakhulu iiprojekthi ezincinci, kodwa ayisebenzi ngokwenyani. Ewe kunjalo, baya kwenza uninzi lokuphakamisa ubunzima kwaye oko kubaluleke kakhulu. Ukuba unayo nayiphi na imiqobo ngokomzimba ekuthintela ukuba ungawenzi umsebenzi ngokwakho, iinkampani zokususa okungenamsebenzi kunokuba lukhetho olukhulu nangona kuya kufuneka ulungelelanise ishedyuli yakho kunye neyabo kunokuba nzima. Kubantu abasempilweni, kukho iindlela ezingcono zokukhetha.
Izinto onokukhetha kuzo zinqongophele xa kuziwa ekuchithweni kwenkunkuma kwindawo yakho yokuhlaziya. Nini ngokuthelekisa ukhetho lwakhoIndlela nganye inezinzuzo kunye nexabiso layo kunye nokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi eyona projekthi yakho, kufuneka ufumanise ukuba zithini na iimfuno zakho. Ukuba ufuna olona khetho luphezulu kakhulu, uya kuthatha uhambo oluninzi lokuya emhlabeni. Ukuba awufuni msebenzi wabucala obandakanyekayo, uya kukhetha inkampani yokususa ukungasebenzi. Ukuba unamatyala amaninzi kodwa ufuna indlela engabizi mali, uya kukhetha ukuqesha indawo yokulahla inkunkuma
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo Ukuqasha iDumpster, Ukususwa okungenamsi, ukukhupha inkunkuma | Ushiye uluvo |
Page 2 of 136<Previous123456Okulandelayo >Last »